Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxda Dowladda waa inay 15-ka bishan cadeeyan nooca ay noqon doonto doorashada 2016 – STAR FM SOMALIA
Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxda Dowladda waa inay 15-ka bishan cadeeyan nooca ay noqon doonto doorashada 2016
Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxtinimada Somaliya, Xaliima Ibraahim Ismaaciil (Xaliima Yarey), ayaa waxay maanta Dowladda Somaliya ugu baaqday inay cadeyso nooca lagu wado inay noqoto doorashada 2016-ka.
“Madaxda Dowladda, Xukuumadda iyo Baarlamaankaba waxaa laga rabaa inay cadeeyan nooca, ay noqon doonto doorashada sanadka 2016-ka la qaban doono, haddii ay sheegeen inaysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo codkii ah.” Ayay tiri Xaliima Ibraahim Ismaaciil.
Xaliima Yarey, ayaa 15-ka bishan ku muddeysay waqtiga ay doonayan in lagu cadeeyo nooca lagu wado inay noqoto Doorashada Madaxtinimada Somaliya, ee sanadka ina soo aadan.
“15-ka bishan August waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan qaabka ay u dhici doonto doorashada. Dadka Somaliyeed oo dhan waxay suggayan noocii ay doorashadu noqon laheyd.” Ayay tiri Xaliima Yarey.
Marwo Yarey, ayaa waxay tilmaamtay in Guddiga Doorashada Madaxtinimada Somaliya, uu diyaar u yahay Qabashada Tartanka Doorashada, iyadoona meesha ka saartay in la ogaado, cidii ku soo bixi laheyd nooca cusub ee doorashadaasi.
“Nidaamka cusub doorashada sanadka 2016-ka ma cadda cidii ku guuleysan laheyd. Guddiga Doorashada haddii aan nahay waxaan u diyaargarownay qabashada doorashada.” Ayay tiri Xaliima Yarey.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo isna qiray inaanay dalka ka dhici karin doorasho xor ah 2016, ayaa taasi bedelkeeda sheegay doorashadu inay noqon doonto mid ka qurux badan, tii isaga lagu soo doortay saddex sano ka hor.
Maqaaxi ay fadhiyen Ciidanka Dowladda oo lagu qarxiyay